Dukaamo Ganacsi Ay Lahaayeen Ganacsato Soomaaliyeed Oo Lagu Gubay Koofur Afrika+Sawiro | Saxil News Network
Dukaamo Ganacsi Ay Lahaayeen Ganacsato Soomaaliyeed Oo Lagu Gubay Koofur Afrika+Sawiro
Hargeysa(SaxilNews)-Goobo ganacsi ay lahaayeen Ganacsato Soomaaliyeed ayaa lagu gubay magaalooyin ka tirsan dalka Koofur Afrika, iyadoo la isu diyaarinayo doorashada dowladaha hoose ee dalkaas ka dhici doona.
Xaafada Mbkweni oo 70km u jirta magaalada Cape Town ayaa lagu gubay dukaamo ganacsi oo dhowr ah, kadib markii shacab careysan dibad baxyo ka dhigeen.
Dibad baxay ka dhacay deegaanka ayaa ka dambeeyay markii dad loo diiday inay dhul dhistaan, waxaana taasi keentay in banaan bax rabshado wata inuu ka dhaco, kaasoo lagu gubay mehrado ganacsi.
C/raxmaan Faarax Xundubeey oo ka mid ah ganacsatada hantidooda la boobay ayaa sheegay in goobahooda ganacsi ay ka qaateen kaliya sharciyadii ay dalka ku joogeen, isla markaana wixii hanti ah ee dukaanka taalay la gubay.
Guddoomiyaha Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town Muuse Afrax ayaa sheegay in xilliyada doorashooyinka la gaaro ay sii kordhaan rabshadaha, isla markaana dadka ajaaniibta ay la kulmaan dhibaatooyin.
Ma ahan markii u horeysay ee hanti ay leeyihiin dad Soomaaliyeed lagu boobo ama lagu gubo dalka Koofur Afrika.